Wada noolaansho: Xirmo wanaagsan oo ah qalab jabsiga | Laga soo bilaabo Linux
Wax qarsoon cidna uma aha tan iyo markii uu soo ifbaxay Mr. Robot: taxane Geek ah oo aadan rabin inuu ku seego Xiisadda ku saabsan jabsashada ayaa si dhakhso leh u koray, waxaan sidoo kale aragnay xiise weyn oo loo qabo isticmaalka dawooyinka sida Kali Linux dad badanna sidoo kale way na soo gaarayaan iyagoo raadinaya qalab jabsiga.
Dhammaan kacdoonkan ku saabsan amniga kombuyuutarka, dambiyada internetka, jabsashada anshaxa iyo kuwa kale, waxay keeneen abuuritaanka qolal codsiyo cusub iyo waliba waxyaabo cusub, munaasabaddan waxaan si layaab leh ula yaabnay inay jirto meel la yiraahdo Xirmooyinka Qalabka Jabsiga Fsociety kooxahaas dhammaan codsiyada loo adeegsaday Mr Robot waxaadna ku kabi doontaa taxane kale oo ah barnaamijyadooda jabsiga.
1 Waa maxay Xirmooyinka Qalabka Jabsiga Fsociety?
2 Sidee loo rakibaa Xirmada Qalabka Fududeynta Xirmooyinka?
Waa maxay Xirmooyinka Qalabka Jabsiga Fsociety?
Waa xirmo qalab loogu talagalay jabsiga multilatform iyo ilaha furan, oo isugu jira amarro iyo codsiyo taxane ah oo la xiriira amniga kombuyuutarka iyo jabsiga, iyagoo si gaar ah u hubinaya inay heli karaan barnaamijyadan loo adeegsaday taxanaha telefishanka caanka ah Mr. Robot.
Qaab-dhismeedkan horumarsan ayaa noo oggolaanaya inaan sameyno tijaabooyinka wax-ka-qabashada wuxuuna la yimaadaa qalabyo ujeedkoodu yahay ururinta macluumaadka, helitaanka ereyada sirta ah, sameynta tijaabooyinka wireless-ka, ka faa'iideysiga nuglaanta, weerarada barnaamijyada websaydhka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, qabashada ka-faa'iideysiga, iyo sidoo kale adeegsiga urinta iyo Is xoqin
Waxaa jira in kabadan 50 codsi oo si otomaatig ah loogu rakibi karo waxkasta oo Linux ah, ujeedada loo yaqaan 'Fsociety Hacking Tools Pack' ayaa ah in la helo tas-hiilaadyo laga bilaabayo jabsiga iyo in la isku geeyo qalab casri ah oo ku saabsan amniga kombuyuutarka. Faahfaahin ka mid ah qalab kasta oo ka kooban xirmadan ayaa la heli karaa halkan.
Sidee loo rakibaa Xirmada Qalabka Fududeynta Xirmooyinka?
Ku rakibida xirmadan qalabka jabsiga waa mid aad u fudud (xitaa waan isticmaali karnaa aaladaha aan ubaahan nahay inaan rakibo kaliya adoo ordaya dalabka Python ee suite), talaabooyinka lagu rakibo ama lagu cusbooneysiiyo codsiyada ku saabsan distoorkeena waa sida soo socota:
Fur terminal oo aad maamusho amarradan soo socda:
Tani waxay ka fulin doontaa liiska farqiga barta, halkaas oo aad ku tijaabin karto codsiyada sameeya ama rakibi karo ama cusbooneysiin karto dhammaan qalabka jabsiga. Xaalada rakibida, si fudud u dooro ikhtiyaarka 0, ka dibna dooro oo ku raaxeyso qaybta codsiyada.
Fiidiyow sharraxaad wanaagsan leh oo ku saabsan qalabkan iyo isticmaalkiisa ayaa laga arki karaa hoos:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Fsociety: xirmo aad u fiican oo ah qalab jabsiga
Waad salaaman tahay, wanagsan yahay, raali noqo, laakiin ma ii oggolaaneyso inaan rakibo, calaamadee kan.
Barnaamijka "git" lama rakibin. Waad rakibi kartaa adoo garaacaya:
sudo apt rakibo
bash: cd: fsociety: Faylka ama galka ma jiro
jukame @ jukame-Satellite-A305D: ~ $ sudo apt rakibi git clone https://github.com/Manisso/fsociety.git
[sudo] ereyga sirta ah ee jukame:
Liiska xirmada aqrinta ... La dhammeeyay
Abuuritaanka geed ku tiirsanaan
Akhrinta macluumaadka xaaladda ... La qabtay
E: Xirmada baloogga lama helin
E: Xirmada lama hayn karo https://github.com/Manisso
E: Waan ka heli waayey wax xirmo ah adoo adeegsanaya "*" oo leh "https://github.com/Manisso"
E: Xirmo lagama helin regex-ka "https://github.com/Manisso"
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah in isla terminalku kuu sheegayo 2 jeer waxa ay tahay inaad qorto LOL
Ku jawaab dicuzew
Ma rumaysan karo. Muxuu nin sidan oo kale ah ku sameyn doonaa barta sidan oo kale ah?
Ku jawaab Waflessnet
rakibid fudud oo ku jirta linux kasta, waa hawl aad iyo aad u aasaasi u ah linuxer kasta ... Waxay ila tahay inaad ka mid tahay kuwa rakibay Linux sababtoo ah iyagu waa haakaris aad u badan, iyo in ka badan oo leh git, wax aad u aasaas u ah aasaasna u ah qof dahsoon sidoo kale ogow ergo horumarineed, waa inaad ogaataa git ...
Ma dhabbaa? xD
Marka laga soo tago nimcada Mr. Robot iyo qoraalka 'kiddie vibe' ee ay leedahay, qoraalka ayaa ah mid aad u adag in la yiraahdo ugu yaraan.
Ma aha oo kaliya daaweyn laakiin waa mid aad u khatar badan, ka soo dejiso koodhadhka boggag kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan 'pastebin', haddii midkoodna ay ku qoraan qoraal xaasidnimo ah marka ay isticmaalayaan fsociety waad cunaysaa. Adiga oo aan sii socon:
Ayaa gacanta ku haya maqaarkan Sideen ku ogaan karnaa in dilka fiska ee soo socda uusan yeelan doonin koodh rakibaysa wax xaasidnimo ah?
Waxaan u maleynayaa inay tahay masuuliyad daro in la isticmaalo ama la xayaysiiyo keydkan kaydka.
Waxyaabaha loo yaqaan 'pastebin' ayaa lagu celceliyaa munaasabado badan ... waana shito aad u weyn sida aad u sheegtay.
Mashruucani waa wax aan ka badnayn hawsha taageere taxane ah, sida fansub, laakiin meesha aad ka arki karto in wax waliba yihiin "facade". Waxay siineysaa hawada gadaal-u-haha ee taxanaha, kuna daabacda cinwaanka qaab aad u wanaagsan qunsulka, iwm. Laakiin taas gadaasheeda, waxaad ku arkeysaa qalad khaldan oo ku jira koodhka (iyo isku darka luqadda horumariyaha ee luqadda Ingiriisiga), oo ah qaab aad u liita oo qaabeysan, soo noqnoqoshada ah, xakameynta khaladaadka ka socda guriga dhexdiisa, iwm.
Si kastaba ha noqotee, iyagu waa hawlo fara badan oo ku xaddidan sameynta os.system (nuqul oo dhaji sida loo rakibo ilaha X).
Ka dib waxa aan u arki karno inay yihiin kheyraad u gaar ah (iyada oo aan la dhigin waxyaabaha sida nmap ah) waa afar jeeg oo macquul ah oo ku jira ereyada ereyada.
Markaa waxaad haysataa jeegag sida url + "/ maamule" si aad u hubiso haddii degel ay ku rakiban tahay Joomla (sida haddii ay taasi u gaar tahay Joomla iyo / ama aan la beddeli karin) ama bogga + '/wp-login.php' si loo hubiyo WordPress. Iyagu waa jeegagga caadiga ah ee aad indhaha ku qaban karto, laakiin ku saleysan shuruudo cayiman oo aan ahayn jawaab lagu kalsoonaan karo.
Laakiin haye, uma baahnid inaad noqotid mid qallafsan. Wali waa barnaamij bilow ah. Dabcan, kama fikireyso adeegsiga wakiillada si loo sameeyo jeegaggan haha.
Dhibaatada tan ayaa ah in mar dambe aad aragto dad sida JuKaMe ah, oo aan aqoon sida loo rakibo git (ama loo aqoonsado guuldarada), laakiin doonaya inay adeegsadaan hacktool. Xaqiiqdii kiiskaaga waa arrin barasho, laakiin hadday sidaas tahay, waxay noqon doontaa 1%, inta soo hartay 99%, waxay isku dayi doonaan inay arkaan waxa ay ku jabsadaan / ku afuufi karaan codsigan "sixirka ah".
Sidaan ku idhi faalladaydii hore, qoraallada kiddies.
Qoraallada kiddies ama dabada, si loo isticmaalo eray dhaqameed iyo qeexitaan.
Waxaan aaminsanahay wax walba oo aan TV-ga ka arko. Sikastaba.
Jawaab ku Bilow
Waxaan farta ku galiyay qoraalkeyga github, waan u duubay si aan si fiican u hubiyo waxa ay tahay, waxaan ka dhigay bisad si aan u hubiyo koodhka si aan u hubiyo, kuakers »oo xitaa weydiisata caawimaad rakibida kali, oo muujineysa la'aanta aqoontooda noocaas ah ee laynka ah, laakiin ma noqonayso, waa uun qoraal aad u fudud oo ay ku jiraan qaar ka mid ah farshaxanka farshaxanka si looga dhigo mid qabow oo otomatiyada soo dejinta barnaamijyada (Pure apt-get rakib) iyo qaar asal ahaan aad u shaki badan, maalinba maalinta ka dambaysa waxaan u adeegsadaa tusaale nmap si aan u hubiyo shabakadaha (waxaan la shaqeeyaa Linux meelaha bay'ada xogta) waana lagu kala jabay qoraalka nacaladda leh, wax macluumaad ah kama soo saareyso iyo had iyo jeer way guul darreysataa, sifiican ayaa loo qabtay qoraalka meesha ma yaallo, shaqadu si joogto ah ayey u jiidanaysaa qoraalkan, aad iyo aad u fudud oo haddii kale la jabiyay.
Waxaan kugula talinayaa inaad rakibto karti
sudo apt-get u samee macquul
sudo suuf git ah (eeg haddii gitku liis garaysan yahay)
sudo karti ku rakib git
Ku soo jawaab Maikel Rivas
Waxaan helaa fariimo dhowr ah oo qalad ah markaan fulinayo isku xirnaanta
Faylka "/usr/share/doc/fsociety/fsociety.py", xariiqa 529
marka laga reebo (), fariin:
SyntaxError: qaab aan ansax ahayn
Jawaab miguel angel obando lancho
Isku day python2
Waad salaaman tahay subax wanaagsan, suurtagal ahaan inaan kuu tuuro cayayaankaas maxaa yeelay waa inaad u ordaa sidii Python2.
Waxaan rajeynayaa inaad xalliso shakigaaga.
lol, marka hore, faallada ugu horeysa waxay tahay waa isticmaale kasta oo aan zploid.net isticmaalin, waxaan doorbidayaa inaan qirto inaan ahay noov oo aan waligay isku dayin linux, maxaa yeelay ma haysto kumbuyuutar kale, oo leh kheyraad wanaagsan iyo inaan halis ugu jiro inaan galo adduunyadan. Kaalay, VPN bilaash ah maahan wax kasta oo xd ah.
Ku jawaab pía
Waad salaaman tihiin subax wanaagsan ma ogi hadii aad ogtahay inaad rakibikarto gadaal gadaal ama hada Kali Linux kumbuyuutar kasta oo USB ah oo aad kadhigi karto bootin, kabilow OS-ka BIOS-ka sidaasna uma baahnid inaad adeegsato booska diskiga adag, hadii sida aad sheegto kaliya aad heysato kombiyuutar aasaasi ah iyo Waxaan qiyaasayaa inaadan rabin inaad wax u dhimayso.
Kali ama waxkasta oo Linux ah wuxuu ku shaqeeyaa si dhakhso leh kombiyuutarada waxqabadka hooseeya iyo guud ahaan kombuyuutar kasta
Salaan, AnonMr. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo wax ku biirintaada. Waxaan ku rakibay Fsociety qaybtayda gaarka ah ee 'Distro MX Linux' oo waliba ah mid Live ah oo la rakibi karo, sidaa darteed, waxaan u isticmaali karaa FSoerone ama barnaamij kasta oo kale kambuyuutarka USB-ga adayg ama adkaysi la'aan.
Waan ogahay su'aashaydu inay tahay jaahil laakiin runtii ma laga jabsan karaa qalabkan mise waa uun tijaabin?
Ku jawaab Elliot
Gef kuma lihi qof, laakiin dadka dhaleeceeya qoraalkan, miyaad la imaan kartaa nooc kale oo si fiican loo sameeyey? Haddii aan aqoontaada heli lahaa, waan jeclaan lahaa, laakiin intaas kuma gaadho.